Tsy hamaha ny iPhone X-ko! Ity ny The Real Fix. - Iphone
rehefa misy bandy mijery anao lavitra
ny fomba fanamboarana imessage amin'ny iphone 6
iphone 6 dia tsy handingana ny sary famantarana paoma
Tsy hamaha ny iPhone X-ko! Ity ny The Real Fix.
Ny iPhone X-nao dia tsy mamoha ary tsy azonao antoka ny antony. Nojerenao izy mba hampavitrika ny Face ID, nanandrana nibosesika ny efijery ianao, fa tsy misy mandeha. Ao amin'ity lahatsoratra ity, aho hazavao hoe maninona ny iPhone X-nao no tsy hisokatra ary hampiseho aminao ny fomba fanamboarana ny olana !
Ahoana ny famohana ny iPhone X
Misy fomba roa samy hafa hamaha ny iPhone X arakaraka ny ahalalanao na tsia ny endrikao. Raha eken'ny Face ID ny endrikao , hoy ny iPhone X-nao swipe ambony hisokatra eo amin'ny farany ambany amin'ny efijery. Raha milaza ny iPhone X anao hoe 'swipe up to open', esory avy eo ambany indrindra amin'ny fampisehoana mba hamohana ny iPhone-nao.
Raha tsy ekena ny endrikao dia hiteny ny iPhone X-nao swipe miakatra hamaha . Ho fantatrao fa mbola mihidy ny iPhone X anao satria ho hitanao eo akaikin'ny tampon'ny efijery ny marika fanidiana.
Raha hamaha ny iPhone X anao dia atombohy amin'ny fikitika ny vodin'ilay fampisehoana. Avy eo, hahazo bitsika hiditra ny kaody passcode iPhone-nao hamaha azy ianao.
Raha tsy eken'ny iPhone X anao ny endrikao dia mety misy olana amin'ny Face ID. Zahao ny lahatsoratray raha manana ianao olana mampiasa ID ID !
Hamarino tsara fa miala ambany avy amin'ny ambany ianao
Ny iray amin'ireo antony mahazatra indrindra mahatonga ny iPhone X tsy hamoha dia satria tsy mifindra avy amin'ny ambany ampy amin'ny fampisehoana ianao. Raha mamafa ny manodidina ny afovoan'ny fampisehoana ianao dia hosokafana ny Notification Center.
Hamarino tsara fa miakatra avy eo amin'ny bara marindrano fotsy ianao amin'ny faran'ny ampahan'ny fampisehoana iPhone X anao!
Mety ho lasa tsy mandray andraikitra ny fampisehoana iPhone X anao noho ny olan'ny rindrambaiko madinidinika izay mety alamina amin'ny famerenana indray. Koa satria tsy mamaly ny efijery dia tsy maintsy hamerina mafy ny iPhone ianao fa tsy hamono azy ara-dalàna.
Famerenana mafy ny iPhone X anao dia dingana telo:
Tsindrio haingana ary afaho ny bokotra ambony .
Tsindrio haingana ary afaho ny bokotra midina .
Tsindrio ary tazomy ilay bokotra sisiny . Alefaso ny bokotra sisiny rehefa miseho ny sary famantarana Apple.
Raha ny iPhone X-nao Na izany aza tsy hisokatra, na raha miverina indray ny olana dia mety misy olana lozisialy manan-danja kokoa mahatonga ny olana. Amin'ny dingana manaraka dia hazavaiko ny fomba ahafahanao miatrika an'io olana momba ny rindrambaiko lalindalina kokoa amin'ny iPhone io.
Manaova DFU Averina amin'ny iPhone X
Ny famerenana amin'ny laoniny DFU (Device Firmware Update) dia mamafa ny kaody rehetra izay mifehy ny fitaovana sy rindrambaiko ny iPhone X anao ary mamerina azy avy eo. Io no karazana famerenana amin'ny laoniny lalina azonao atao amin'ny iPhone!
Zahao ny lahatsoratray a fitsangatsanganana tanteraka amin'ny fanatanterahana famerenana amin'ny laoniny DFU amin'ny iPhone X-nao!
Raha tsy mandray andraikitra ny iPhone X anao rehefa mifafa ianao, dia mety hisy olana eo amin'ny sehatry ny fitaovana amin'ny fampisehoana azy. Raha voasaron'ny AppleCare ny iPhone X anao, manomana fotoana amin'ny Apple Store anao eo an-toerana ary ento ao.
Manoro hevitra ihany koa izahay hanin-kotrana , orinasa mpanamboatra iPhone antoko fahatelo izay hihaona aminao sy hanamboatra ny iPhone eo an-toerana!
iPhone X: nanokatra!
Voahidy ny iPhone X-nao ary afaka manomboka mampiasa azy indray ianao! Raha tsy hisokatra ny iPhone X anao amin'ny ho avy dia ho fantatrao tsara ny fomba hamahana ilay olana. Raha manana fanontaniana hafa momba ny iPhone X ianao dia avelao izy ireo ao amin'ny fizarana fanehoan-kevitra etsy ambany!